नयाँ स्टार कालियन एमबाप्पे
काठमाडौ असार २४
यो विश्वकपमा फ्रान्सका १९ वर्षीय फरवार्ड कालियन एमबाप्पेको यतिबेला चौतर्फी चर्चा चुलिएको छ । फुटबलका महान खेलाडी पेलेको झै झल्को दिने र पेलेलाई नै बिर्साउने खालको उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने अर्का खेलाडीका रुपमा एमबाप्पेलाई हेर्न थालिएको छ । खासगरी रुसमा भैरहेको विश्वकपमा अर्जेन्टिनाबिरुद्ध २ गोल गरेपछि उनको चर्चा बढेको हो । लियोनल मेस्सी रहेको टिमविरुद्धको खेलमा २ गोल गरेका थिए । एमवाप्पेको उक्त २ गोलले नै फ्रान्स अर्जेन्टिनासँग ४–३ ले विजयी भएको थियो ।
उनको खेल्ने शैलीले उनी विश्वका नयाँ स्टार खेलाडी हुन् भन्दा फरक नपर्ला । रुसको विश्वकपले नेयमार, मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई बिर्साउन सक्ला तर एम्बाप्पे सम्पूर्ण दर्शकोको मष्तिस्कमा बसिसकेका छन् । अघिल्लो सिजन लिग वानमा मोनाकोलाई उपाधि जिताउन महŒवपूर्ण खेल खेलेपछि पिएसजीले उनलाई लोनमा भित्र्याएको हो । यदि पिएसजीको लोन सदर भएमा यो सिजनबाट एमवाप्पे ब्राजिलका नेयमारपछिका दोस्रो महंगा खेलाडि बन्ने छन् ।
एमबाप्पेको पारिवारिक कुरा भने अलि भिन्न छ । उनका बुबा क्यामरुनका हुन् भने आमा अल्जेरियाकी हुन् । उनका बुवा आँफै फुटबल प्रशिक्षक हुन् भने आमा ह्यान्डवलको राम्रो खेलाडी हुन् । घरभित्रै फुटबल प्रशिक्षक पाएका एम्बाप्पेले फ्रान्समा युवा टोलीमा राम्रो स्थान बनाए ।
उनी आफू क्रिस्टियानो रोनाल्डोको फ्यान भएको बताउँछन् । आफू १४ वर्षको हुदाँ कोठाभरि रोनाल्डोको तस्बिरहरु सझाएको थिए । रोनाल्डो जस्तै स्टार खेलाडी बन्ने रहर थियो । भविष्यमा रोनाल्डो जस्तै स्टार खेलाडी बन्ने सपना थियो । रोनाल्डोले ४ विश्वकप खेल्दै ६ गोल गरेका छन् ।
भने एमवाप्पेले १९ वर्षको उमेरमै ३ गोल गरेका छन् । फुटबलको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा विश्वकपमा गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन् एमवाप्पे । यो विश्वकपमा पेरुविरुद्ध १ र अर्जेन्टिनाविरुद्ध २ गोल गरेका छन् । विश्वभरिका पन्डितहरुले एमबाप्पेमाथि भरोसा गरेका छन् । हेरौ के फ्रान्सले विश्वकप जित्ला ? के १९ वर्षकै उमेरमा एमबाप्पेले फ्रान्सलाई विश्वकपको उपाधि दिलाउलान् ? यो भने हेर्न बाँकि नै छ ।
फ्रान्सको लागि सन् २०१७ मार्चमा डेब्यु गरेका एमबाप्पेको गोल गर्ने क्षमता, तीव्र गति, दुवै खुट्टाले बल छलाउन र प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको कारण धेरैले उनलाई भविष्यको सुपरस्टारको रुपमा चित्रित गरेका छन् । पेलेले सन् १९५८ को विश्वकपमा १८ वर्षको उमेरमा स्वीडेनविरुद्ध एक्लैले दुई गोल गरेपछि ६० वर्षसम्म कुनै पनि टिनएज खेलाडीले विश्वकपको एकै खेलमा दुई गोल गरेका थिएनन् । उक्त कीर्तिमानलाई एमबाप्पेले ६० वर्षपछि बराबरी गरे ।
को हुन् एमबाप्पे ?
सन् १९९८ डिसेम्बर २० मा जन्मिएका एमबाप्पेको पूरा नाम लोटिन किलियन एमबाप्पे हो । गएको सिजन मोनाकोबाट लोनमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) आएका उनले लोभलाग्दो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । गत सिजन चोटको कारण धेरै खेल गुमाए पनि उनले लिगमा १३ गोल गरेका थिए । सानै उमेरबाट फुटबल खेल्न थालेका उनी एएस बोन्डीको युथ एकेडेमीका उत्पादन हुन् । त्यसपछि आइएनएफ क्लारेफोन्टेन हुँदै मोनाको पुगेका उनी सत्र वर्षको उमेरमै मोनाकोको सिनियर टिमबाट डेब्यु गर्दै नियमित गोलकर्ता बन्न सफल भए ।
सन् २०१६–१७ को सिजन मोनाकोलाई उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपछि उनलाई पीएसजीले कीर्तिमानी रकम तिर्ने सम्झौता गर्दै लोनमा भित्र्याएको हो । यो सिजन लागेसँगै पीएसजीले उनको लागि १ सय ८० मिलियन युरो मोनाकोलाई तिर्नेछ । यो रकम पीएसजीले नै नेइमारको लागि बार्सिलोनालाई तिरेको २ सय २२ मिलियन युरो पछिको दोस्रो ठूलो ट्रान्सफर रकम हो ।
विश्वकै दोस्रो महँगो खेलाडी भए पनि उनी उदार दिलका छन् । उनलाई देश प्रतिनिधित्व गरेर खेल्दा पैसा लिन हुँदैन भन्ने महसुस हुन्छ । त्यसैले उनले आफूले फ्रान्सको जर्सी लगाएर खेल्दा पाउने सबै रकम अपांग बच्चाहरुको लागि दान दिने बताएका छन् ।
उनले विश्वकपमा खेलमा प्रति खेल बराबर १७ हजार पाउण्ड प्राप्त गर्छन् । त्यस्तै फ्रान्सले विश्वकप जितेमा उनले पारिश्रमिकबाहेक दुई लाख पैंसठ्ठी हजार पाउण्ड बोनसको रुपमा प्राप्त गर्नेछन् । उनले आफूले प्राप्त गर्ने रकम र बोनस अपांग बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने च्यारिटी संस्था प्रायर्स डे कोर्डेस एसोसिएसनलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको फ्रान्सेली दैनिक लि इक्विपेले जनाएको छ ।
‘रोनाल्डो अब मेरो आइडल रहेनन्,’ उनले भने, ‘अब त्यो समय सकियो । ‘उनी मेरो बाल्यकालका हिरो हुन्, उनीसँग मैले भेटेको समय निकै उत्साहपूर्ण थियो,’ स्पेनिस पत्रिका मार्कासँग एमबाप्पेले भने, ‘म सानो हुँदा उनीको खेल हेरेर उत्साहित हुन्थेँ । तर अब त्यो समय सकियो । अब म बर्नाबेउ खेल्नका लागि जाँदैछु र जितका लागि पनि ।’
यो सिजनमा रियल मड्रिडले एमबाप्पे भित्र्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, उनले रियलको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै मोनाकोबाट आफ्नो बाल्यकालको क्लब पेरिस सेन्ट–जर्मेन गए । प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै आएका १९ वर्षीय एमबाप्पेलाई रोनाल्डोलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने खेलाडीको रुपमा हेरिएको थियो । उनले कुनै बेलाको आफ्ना आइडल रोनाल्डोसँग अब प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । उनीहरुले च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ को खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा आउँदो फेब्रुअरी १४ मा पिएसजीले रियल मड्रिडसँग बर्नाबेउमा खेल्नेछ ।
एमबाप्पेले रोनाल्डोबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने बताइरहँदा उनी अतुलनीय खेलाडी भने नभएको धारणा राखे । उनले आफ्नो नयाँ हिरोको रुपमा पिएसजीमै रहेका नेइमारलाई उभ्याए । उनले रोनाल्डो र नेयमारलाई तुलना गर्न सकिने धारणा राखे । अत्यन्तै सहयोगी र आत्मिय खेलाडीको संज्ञा दिँदै एमबाप्पेले नेयमारलाई आफ्नो हिरो बताएका हुन् ।